Madaxweynaha Axmed Madoobe oo ku baaqay in la sharciyeeyo guryaha dhisan iyo boosaska banaan. | Radio Banadir
Home Maqaall Madaxweynaha Axmed Madoobe oo ku baaqay in la sharciyeeyo guryaha dhisan iyo...
Madaxweynaha Axmed Madoobe oo ku baaqay in la sharciyeeyo guryaha dhisan iyo boosaska banaan.
Sabti, 02 Feebaryo, 2019 (RBB News) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday Xarunta Hay’ada dhulka Jubbaland isagoo halkaas u tagay si uu u sharciyaysto guri uu gaar u leeyahay oo ku yaala Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee Jubbaland.
Previous articleDad ku dhintay biyo xireen kusoo fatahay Dalka Brazil.
Next articleDhageyso:- Warka Habeenimo Ee Radio Banadir 103.4mhz, 8:00pm.